Izilwane ezihlobene nezilwane ezifuywayo - Amathuba we-Pet Franchise | Franchiseek
Izilwane ezihlobene nezilwane ezifuywayo
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Izilwane ezihlobene nezilwane ezifuywayo
Okukhonjisiwe Izilwane ezihlobene ne-Franchise
Ama-Franchise akamuva ahlobene ne-pet
Izilwane zasekhaya ezifuywayo
Ngesidingo esikhulayo sezinsizakalo zezilwane ezifuywayo njengokuhamba kwenja, ukunakekelwa kwezilwane zasekhaya kanye nabantu abaningi abaningi sebeqala ukuthembela ezinsizakalweni zokunakekelwa kwezilwane ukubanakekela le misebenzi futhi banakekele izinja zabo. Lokhu kuyimboni ekhula ngokushesha futhi ungamane uthathe igama lethu kuyo. Ngoba namhlanje sizokwabelana ngezibalo ezizungeze imboni yezilwane ezifuywayo yomhlaba wonke kanye nesisekelo esikhulu samakhasimende okufanele sinikele ekutshalweni kwemali.
Izibalo ezizungeze imboni yezilwane ezifuywayo.
Manje sizofaka uhlu lwezibalo ezimbalwa ezizungeze isisekelo samakhasimende kanye nokukhula okuphelele komkhakha hhayi ngokwezomnotho kepha futhi nenani elimangalisayo lamathuba omsebenzi elinikezwa lo mkhakha othokozisayo.
Abantu baseMelika bachitha ngaphezulu kwama- $ 50billion ngonyaka ezifuyweni zabo
Ama-24% abantu abadala base-UK banekati elinabantu abalinganiselwa ukuthi 10.9 abayizigidi ezingu amakati wezilwane.
26% yabantu abadala base-UK abanenja enabantu abalinganiselwa ukuthi 9.9 abayizigidi ezingu izinja zezilwane.
Abantu abangaphezu kwengxenye emhlabeni jikelele banezilwane ezihlala nabo
I-Argentina, iMexico neBrazil zinamaphesenti aphezulu kakhulu abanikazi bezilwane zasekhaya, ezilandelwa yiRussia ne-USA
Amaphawundi aseBrithani angaphezu kuka- $ 2.4 billion asetshenziswa njalo ngenyanga e-UK ezifuyweni.
Izinja isilwane esibiza kakhulu ukusondla nabantu sisebenzisa i- $ 178 ngenyanga ngokwesilinganiso.
Ngabe lezi zibalo zibonisa ini ngomkhakha wezilwane emhlabeni jikelele?
Lezi zibalo zibonisa isisekelo esikhulu samakhasimende kanye nenani elikhulu labantu okufanele uzikhangise ngabo lapho usebenza i-pet franchise yasekhaya. Ngakho-ke lezi zibalo zisize ngethemba ukuthi noma ngubani obheke ukutshala imali ephoyiseni elihlobene nokuthola isilonda esihle emakethe yezinsizakalo zezilwane kanye nesidingo esikhulu.
Yiziphi izinhlobo ezahlukene zezilwane ezifuywayo ezitholakalayo?
Kunezindawo eziningi ezihlukene zezilwane ezifuywayo emhlabeni wonke, ziyahlukahluka ngokuhamba kwenja yonke indlela eya kumahhotela wezinja ezihamba phambili. Ngakho-ke ngincoma kakhulu ukuthi ubuke isikhathi eside ngokusebenzisa isigaba sethu sezilwane ezifuywayo ukuthola umbono wokuthi iyiphi engcono kakhulu kuwe ngoba eFranchiseek sinikeza uhla olukhulu lwama-franchise ahlukene kanye nezimboni ezahlukahlukene. Futhi uma ungaqiniseki ngokulandela umsebenzi embonini yezilwane ezifuywayo kodwa unentshisekelo yokuqhamuka Franchise ngincoma ukuthi ufunde ngokubhaliwe kwesiqondisi sethu sezilwane ezifuywayo.
Mayelana ne-Ideas2Biz Ideas2Biz ngokukhethekile imibono yebhizinisi - amathuba amasha ebhizinisi adinga umuntu ozowathatha, awakhule,…
I-OpenBrew inezindawo eziningi zama-franchise akhona athengiswayo. Lawa mabhizinisi ase-OpenBrew akhona anesizinda samakhasimende esivele sikhona…
Singobani Ngokushesha Lane kungukusebenza komhlaba wonke okuzenzela okunezigaba ezingaba yinkulungwane ezinamalayisense futhi ezinenkululeko emhlabeni jikelele. I…
Mayelana ne-VR Simulators VR Simulators yasungulwa ngonyaka we-2017 futhi yasungulwa njengesikhungo sokuqala sokuncintisana se-5D seYurophu ngamandla amakhulu we…
Izikole ze-Razamataz Theatre zasungulwa ngonyaka we-2000 futhi zinikeza ukuqeqeshwa okungafani nomdanso, idrama nokucula kanye namathuba amnandi…
Mayelana ne-Agency Express I-ejensi Express Franchise iyinkampani yebhodi enkulu kunazo zonke yezwe yase-UK kuphela futhi eyinkampani yezakhiwo…
Yini iRent2Buy? Sigunyaziwe ngumkhiqizi wezinhlobo eziningi we-FCA brand-brand, isigaba semikhakha eyidijithali kanye nezinsizakalo zezezimali, sihlose ukuhlinzeka amakhasimende ethu…
I-Autobrite Direct Franchise Siyakwamukela ku-Autobrite Direct Mobile Shop Franchise entsha, ithuba elisha nelithokozisayo lokusebenzisa…